एक केटी गरेको राम्रो मित्र, सारा संसार थाह - हीरे भन्ने तथ्यलाई। महिला लगभग arrogantly गर्व यो भन्न, र मानिसहरू - आफ्नो दाँत gritting र पर्स भित्र घुमाई। विशेष गरी लोभी महिलाहरु पनि सपनामा हीरे हेर्न, र सामान्यतया तिनीहरूलाई कालो "फेरारी" मा एक सुन्दर राजकुमार संलग्न छ। यो सपना सक्छन् शायद केही खराब अनुभव portends, र सम्भवत भविष्यमा थप भविष्यवाणी भन्दा सपनाहरु देखने को वर्ण देखाउँछ। तर भोलि आशा के, सुन को यदि सपना? सपना राम्रो छ भने लागि? सुनको झुम्का हेर्न - के?
यो सबै सन्दर्भ मा निर्भर गर्दछ
अत्यन्तै सकारात्मक व्याख्या यो सपना असम्भव छ, र को मूल्य आफ्नो हदसम्म सन्दर्भ मा निर्भर गर्दछ। यो एक ठूलो भाग्य गर्न सम्पूर्ण सपना मा सुन, तर माथि-उल्लेख सजावट को सपना देख्यो मानिस, भविष्यमा राम्रो देखि केहि आशा छैन भनेर विश्वास छ। यो सपना चाँडै उहाँले धेरै जिम्मेवार कुरा सामना गर्न हुनेछ भनेर भन्छन्। सायद यो आफ्नो आवेग लागि हीरा हार खरीद जस्तै केहि हुनेछ।
सुन - जीवनमा उत्तिकै रमाइलो छ, र सपनामा कि
धेरै महिलाहरु लाग्छ 'सुन के सपना s झुमके, विशेष गरी यदि तिनीहरूले शुक्रवार गर्न बिहीबार देखि रात देखे सपना। तपाईं भविष्यसूचक सपना लाग्छ सक्छ, र दुई प्यारा सानो कान को बाली को रूप मा तपाईँले Privalov आनन्द, तर मूल्य धेरै गहिरो हुन सक्छ। यो सपना आफ्नो मालिक तपाईं प्रचार वा आफ्नो तलब वृद्धि गर्न योजना छ मतलब हुन सक्छ। साथै, सुनको झुम्का, सपनामा देखेको सफल र likable जवान संग एक portent सुखद जानकारी हुन सक्छ। र यो सुनको झुम्का र व्यस्त जवान केटी के सपना छ? यो चाँडै विवाह रही अर्थ हुन सक्छ। तर हुन होसियार - वैवाहिक पीसने एक बन्चरो हुन सक्छ। एक महिला त्यो ऐना अघि र कान को बाली मा राख्दै preens कि सपना भने, यो एउटा सुन्दर उपन्यास को निकटता संकेत हुन सक्छ। कुनै पनि मामला मा, तपाईं पनि कान को बाली थियो ठ्याक्कै सुन कति सम्झना गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। तिनीहरूलाई को बहुमत बहुमूल्य धातु, यो सपना मतलब थप भाग्य देखि डाली थियो। त्यो हो सुन कुन सपना कान को बाली!
धन सधैं राम्रो भाग्य ल्याउँछ गर्छ?
तर सधैं यस्तो सपना राम्रो कुरा अर्थ राख्छ। तपाईं वास्तविक जीवन एउटा analogy आकर्षित गर्न सक्नुहुन्छ। कम्तिमा superficially संसारको इतिहास थाह भने, यो सबै भन्दा मानव misfortunes किनभने untold धन भयो कि उल्लेख हुनुपर्छ। एउटै सपना अवलोकन छ। उदाहरणका लागि, एक सपना कान को बाली मा प्रस्तुत यदि - यो राम्रो भाग्य छ, तर तपाईं हराएको छ भने - समस्या को लागि त पर्खनुहोस्। र यो सुनको झुम्का तिमी कुनै बिक्री छन् के सपना छ? सायद, यो एक घनिष्ठ मित्र को हानि प्रतिज्ञा वा एक प्रेम, र सामान्य मा राम्रो कुनै अर्थ छैन। त्यहाँ एक सपना जस्तै अर्थ हुन सक्छ अर्को धेरै रोचक व्याख्या छ। सुनको झुम्का, एक महिला उनको प्रतिद्वन्द्वी सोध्छन् जो, त्यहाँ मानिस आफ्नो Mistress लागि उनको हुनेछ भनी एक संभावित जोखिम थियो मतलब सकेन। बस सपना सजावट राख्न - एक मूल्यवान अधिग्रहण, तर कान को बाली खराब ड्रप। यो मूल्यवान वस्तुहरू वा महत्त्वपूर्ण सम्पर्क हानि को एक चिन्ह मानिन्छ।
केही राम्रो भविष्य डायरी भविष्यवाणी
सधैं राम्रो मुडमा - सपना जस्तै जीवनमा ठूलो फेला। सुनको सपना फेला कान को बाली निकट भविष्यमा एउटा असल मित्र खोज्न छ। तिनीहरूले यो ठीक भाग्य अनुमोदन को प्रतीक हो भन्छन्। सायद, यो सपना मानिस चाँडै धनी हुनेछ, वा कम्पनी मा अग्रणी स्थान को एक प्राप्त देखेको भएको। तर फेला पार्न र सपना सुनको झुम्का गुमाउन - एक बरु तटस्थ चरित्र। शायद राम्रो कुरा रूपमा सजिलै यो जानेछ रूपमा हुनेछ। तथापि, प्राप्त गर्छन् अग्रिम दुखी छैन - यसको भाग्य हामी आफूलाई अझै पनि संचालन गर्ने। तपाईं कहिल्यै ध्यान गर्न सक्छन्, तर तपाईं उसलाई आफ्नो मनसाय र निर्णय व्यवस्थापन गर्न अनुमति सक्दैन। सधैं साधारण अर्थमा प्रयोग गर्नुहोस्, र त्यसपछि आनन्द पक्कै तपाईंलाई आउनेछ।
सपनामा सिँढी: सपना व्याख्या
यो के हो - सपनामा बिरालोको बच्चाहरुको?
सपना व्याख्या: कछुवा - शक्ति को एक प्रतीक
किन कागज पैसा हटाउन र सबै तिनीहरूलाई जोडिएको छ
सपना व्याख्या बारेमा प्रश्न: के boas सपना?
तारेको पोर्क: एक नुस्खा साँच्चै "लोग्नेमान्छेको" व्यञ्जन
Irina Bugrimova: व्यक्तिगत जीवन, जीवनी, फोटो